प्रेम बानियाँ किन पलायन भए ! – बसन्त क्षितिज-Brtnepal.com
Loading... प्रेम बानियाँ किन पलायन भए ! – बसन्त क्षितिज
Published on September 29, 2016 at 11:11 am
ठग्न पाउनु पर्छ भन्ने मेनपावरको भण्डाफोर गरे,लुट्न पाउन पर्छ भन्ने ट्याक्सी हड्तालको विरोध गरे । पित्तल मिसाउने सुन पसले,मट्टीतेल मिश्रण गर्ने पेट्रोल पम्पको भण्डाफोर गरे । गुदपाकको बासीपन देखेर विरोधमा उत्रिए । हत्या,हिंसा र भष्ट्राचारको दोहोलो काटे ।
चुरोट बेच्ने कम्पनी करोडौं कमाउछ्न् र रक्सी बेच्ने कम्पनी अरबमा खेल्छन् । कृषकहरू अभावमै जीवन काट्छन् । घर बनाउन ७ %,गाडी किन्न ६% र कृषि विकास बैकमा कृषि कर्जा १२% अनि उत्तिकै झन्झट कर्जा लिन ?
अव भन्नुस अलिकति दायाँबायाँ नगर्ने,हस् हजुर र ज्यू नभन्नेहरु कसरी बाच्छन् यो देशमा र कसरी बस्छन् ? ओलीको देशप्रेम र अडानमा सहमत भए,प्रचण्डको लिङ्ग नछुट्टिएको नपुंसकताको विरोध गरे । पार्टीको बिल्ला भिराए । काम गर्ने
टिभी सञ्चालकले सीमा बाधे होलान् । हाम्रो देशमा,राम्रोको समर्थन र नराम्रो कुराको विरोध गर्दा पनि अपराध हुन्छ । त्यसैले देश छोडे । धेरैले छोडेका छन् ।
जय स्वाभिमान ! भने । हाम्रो आखा खोलिरहे । हामी चुपचाप सहिरह्यौ । भूकम्पले भत्किएको घरको पुर्निर्माणमा समेत राजनीति हुन्छ । बर्खा,जाडो र गर्मीमा ती जस्ताको टहराको कथा बुने । भोगाइ देखाए । हाम्रो स्वाभिमानलाई झस्काइ रहे ।
तर दिल्लीको इसारामा चल्ने सरकार,सदन र नेताले जो अन्धो र बहिरो छ । जो कुनै सर्कसमा राखिएको जोकर हुन् । कुनै खेतको बिचमा गाडिएको बुख्याचाइ भन्दा फरक छैन । प्रेम बानियाँ जस्तालाइ पत्थरलाई कविता सुनाए झैँ लाग्यो र पलायन भए । सरोज खनाल दाइ झैँ फर्किनेछ प्रेम बानियाँ स्वदेश तर फरक यति हुनेछ । जवान रहदा सरोज खनालको अभिनयको जोस र उमेर रहदा प्रेम बानियाँ खवरदारी मिस गर्नेछौ ।
बनिया(भारतीय)को इसारामा देश चल्ने भएपछि जय स्वाभिमान भन्ने बानियाँहरु पाताल भासिन्छ । फेसबुकबाट सभार